Indlela isilikhi: imikhiqizo yokunakekelwa komzimba ekwindla
Ihlobo alilona nje elihle, imizwelo ekhanyayo, amaholide asekude olulindelwe olwandle nasemaphathini amahle ebusuku. Futhi ... ukuhlolwa kwangempela esikhumbeni sakho! Ukushisa kwelanga ezinyangeni zasehlobo kwenza isikhumba soma futhi siphume. Sikulungisa lesi simo ngosizo lwama-novelties amahle kakhulu nemikhiqizo yokunakekela ubuhle eyaziwa futhi ethandekayo yokunakekela isikhumba!
Ukuhlanzwa okuphumelelayo: khetha ukuhlunga
Ukuhlanza i-epidermis kungenye yezinyathelo ezibalulekile endleleni yokukhanya, isikhumba esinempilo. Yenza isikhumba sibe bushelelezi, ususe ungqimba oluphezulu lwamaseli abonisiwe, kuzosiza ukuxosha umzimba.
Kuyafaneleka ukulalela ukunaka okuvela ku-Collistar - usawoti-ukuhlunga. Ngokusho abalandeli abathembekile balo mkhiqizo, ukwelashwa okuyisimangaliso kungasetshenziselwa nje ukukhwabanisa umzimba, kodwa futhi kuyisisindo sezinwele. Ukuhlanza isikhumba kuyinto encane futhi enomusa okusebenzisa emva kokubheka ukhilimu womzimba - hhayi ngempela.
Esinye isikhombi-ozithandayo engxenyeni ethi "Lux" - ukulimaza nge-particle ye-lemon ikhasi le-Sothys. Umkhiqizo awugcini nje kuphela ukuhlanza isikhumba, kodwa futhi ubumnene unomsizi ngosizo lwembewu ne-sunflower imbewu eyakhayo.
Kukhona "izisebenzi ezinhle kakhulu" phakathi kwemikhiqizo yokuhlanza yohlu lomnotho. Kufanelekile ukunaka u-honey-sea sihlahla se-nuckrava esihlahleni esivela eNatura Siberica kanye ne-"chocolate" esiphundu esiphundu emzimbeni we-Avon.
Hy hydration: ama-gels amahle, ama-lotions, amafutha omzimba
Ngemuva kokuthatha izibhakabhaka zelanga ehlobo, isikhumba sidinga ukuphumula okuhle. Phela, enye yezinkinga eziyinhloko emzimbeni we "ekwindla" iyomile futhi ihlolwe.
I-gel ne-aloe vera ephuma kuHolika Holika isivele ithole amamaki aphezulu, kokubili kubathengi nakubungcweti bezobuhle. Ijelisi aligcini ngokudla kuphela futhi liyancipha isikhumba, kodwa futhi linempahla ye-bactericidal. Ngakho-ke, ingasetshenziswa nje kuphela njengamanzi omzimba womzimba, kodwa futhi njenge-gel yokubuyisela emuva kokushisa, njenge-mask ekunciphiseni ukukhathala kwamehlo, njengokungathi ngemuva kokugcoba i-gel nanjengoba imaski eboya izinwele.
I-emulsion eshukumisayo i-Lipicar Laha kusukela ekhemisi brand yaseFrance iLa Roche-Posay - enye ikwindla kufanele ibe nayo. Leli thuluzi alinamathele kahle kuphela, lenza isikhumba sithobe futhi silky, kodwa futhi siphinde sibuyisele ukulinganisela kwe-hydrolipid futhi sisebenzise izindawo ezivikela isikhumba. I-emulsion, njengobubanzi bomkhiqizo wemikhiqizo, ayibanga imbangela yemithi futhi ifanele ngisho nasesikhumba esomile nesicwebile kakhulu.
Imfucumfucu yamafutha omzimba womzimba kusuka ku-AHAVA iyinto entsha evumayo emakethe yemikhiqizo yobuhle. Umkhiqizo unephunga elimnandi lika-cactus ne-pink pepper, futhi ukubunjwa kwalo kuyamangalisa: i-jojoba yamafutha, i-sesame, i-vitamin E ne-Algae ekhishwa uLwandle Olufile. Amafutha aphelelanga ngokuphelele ngokuphefumula, kodwa futhi avimbela ukuguga kusenesikhathi ngaphambi kwesikhumba, ukunikeza ukukhanya kwemvelo, ukukhanya okunempilo.
Bath for the Queen: "abamele" best of the bath bath line
Ungathatha ukugeza okuvela kuNkulunkulu ... futhi ngaphandle kwezimbali! Ijelisi eliyingqayizivele elithambile elivela eLierac elinomlilo ovuthayo elimnandi liyokunika izikhathi zokujabula kanye nenjabulo. Esikhathini se-gel - izitshalo ze-gardenia, i-camellia ne-jasmine, epholisa kahle futhi encelise isikhumba.
I-gel yokugcoba ngokukhishwa kwe-ginkgo biloba kusuka eMades Cosmetics yize ihlelwe ngumenzi njengendlela yamadoda, kodwa noma kunjalo, i-gel inebutho elikhulu labalingani besifazane naphakathi kobulili obuhle. Iphunga elicwengisisiwe elihle elihambisana ne-mix of spices yikhambi elihle kakhulu lesipenithi ngenkathi ebandayo, futhi izithako zemvelo zomkhiqizo zondla kahle futhi zithinte isikhumba. Futhi-yebo! Gel kusuka Mades Cosmetics - kakhulu ukonga isicelo!
Iningi "ekwindla" lisho ukugeza ukuthi yi-brand yase-Italy L'erborario. Kuyinto i-gel yokugeza ene-amber ne-vithamini E. Ukufaka ibhodlela le-chic ngaphandle kwalezi zingxenye ezibalwe ngenhla, i-lotus, i-vanilla ne-rice extracts, umkhiqizi uqinisekisa ukuphumula okungu-100%, ukudla okunomsoco nokuphucula isikhumba ngesikhathi sokugeza.
Cha - i-cellulite: ukunakekelwa okukhethekile komzimba ekwindla
I-anti-cellulite ukhilimu e-French brand Ella Bache - kulabo abazimisele kakhulu ukulahla i-cellulite engaboni kahle. Sekusele inyanga umkhiqizi uthembisa ukuguqula ngokuphawulekayo isimo sesikhumba senkinga ezinkalweni nasezintweni ezingcono. I-massage yokusebenzisa ngokuyisetjenziswa kwaleli thuluzi idala izimangaliso zangempela!
Ukuvimbela ukubukeka kwe "peel orange" kuzosiza ukuqinisa ukhilimu womzimba kusuka ku-Shiseido - Ukuqinisa i-Body Cream. Izitokisi zemifino yemvelo, ezifakwe ekubunjweni kwayo, zizokuvimbela ukulahlekelwa komswakama, zilondoloze ukuqina futhi zivimbele ukubonakala kokuvuvukala kwama-nonesthetic kanye ne-cellulite.
Umswakama we-Organic wesikhumba nge-anti-cellulite umphumela kusuka ku-Organic Shop uqukethe amafutha wemvelo we-argan waseMoroccan no-orange obomvu. Ngaphezu kwalokho, ukwakheka komkhiqizo kubandakanya ukukhishwa kwe-sinamoni ne-nutmeg, okuphikisa ngokuphumelelayo i-cellulite futhi unike isikhumba isiphunga elimnandi, elimnandi.
I-Polisensornye SPA: sisebenzisa zonke izinzwa
I-Almond tenderness ochungechungeni olusha lokunakekelwa komzimba kusuka kuWeleda
Ukukhipha amakhambi omuntu we-cellulite
Izimfihlo zokunakekela isikhumba esifanele
Isikhumba sidonsa ngemuva kokulahlekelwa kwesisindo ngokushesha
Anti-cellulite massage theory kanye nevidiyo
I-mascara enhle kakhulu ye-eyelashes
AmaFi Volochkova anikela ukuphikisa izandla zakhe zomklami
Ukunciphisa ubisi ebisi kubantwana
Amabhisikidi wetiyi, aphile
Indlela yokwenza ukwakheka okuphelele
Umdlalo onjalo omuhle ...
Isaladi le-squid noshizi
Yidla izitsha etafuleni lokugubha
Amathiphu awusizo amantombazane
Okufanele ukwenze uma umyeni wami enenkosikazi
Isobho senkukhu enezindwangu, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kanye ne-zucchini
Indlela yokukhuluma nesoka lakho efonini
Shish kebab kusuka inkukhu multivarka
Indima ye-progesterone ekuphumeleleni kokukhulelwe
Indlela yokuqeda imidwebo ye-acne